Oramin-G Soft Multivitamin Supplement Cap (30 capsules) – SUNNY eSTORE
Oramin-G Soft Multivitamin Supplement...
Oramin-G Soft Multivitamin Supplement Cap (30 capsules)
Pacific-AASKU: OT-ORAM-1-228 (S010)
8,000 Ks 8,600 Ks
Oramin-G တွင် မဖြစ်မနေလိုအပ်သည့် ဗီတာမင်များနှင့်သတ္တုဓာတ်များ၊ ကိုရီးယားဂျင်ဆင်းနှင့် ရှားစောင်းလက်ပတ်တို့၏ ထူးခြားသည့်ပေါင်းစပ်မှုပါဝင်ပြီး၊ ၎င်းသည် ကျန်းမာသည့်ကိုယ်ခံအားစနစ် ကို မြှင့်တင်ပေးကာ အလုံးစုံနုပျိုလန်းဆန်းမှုကို ပံ့ပိုးပေးခြင်းတို့အား အတူတကွလုပ်ဆောင်ပေးသည်။
Pacific Nature’s® Oramin-G သည် ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းရှိ စနစ်မျိုးစုံတို့၏လုပ်ဆောင်မှုများကို အထောက် အကူပြုခြင်းဖြင့် ကျန်းမာခြင်းသုခအား ပံ့ပိုးပေးသည့် multivitamin နှင့်သတ္တုဓာတ် ဖြည့်စွက်ဆေးဖြစ် သည်။ ၎င်းတွင် Panax ဂျင်ဆင်းနှင့် ရှားစောင်းလက်ပတ်အဆီနှစ်များနှင့်အတူ သာလွန်သည့်ဗီတာမင် နှင့် သတ္တုဓာတ်တို့ ပါဝင်သည်။
Multivitamin သည် အစားအစာများထဲတွင် ပုံမှန်အားဖြင့် တွေ့ရလေ့ရှိသည့် ဗီတာမင်မျိုးစုံ ပေါင်းစပ် ထားခြင်း ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် အစားအစာတစ်ခုတည်းဖြင့် ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ခြင်းမရှိသော အကြံပြု ထားသည့် နေ့စဉ်အာဟာရလိုအပ်ချက်အပေါ် ကွာဟနေမှုများကို ဖြည့်ဆည်းပေးခြင်းတွင် အထောက်အ ကူပြုသည်။
Multivitamin ကို နေ့စဉ်သောက်ခြင်းဖြင့် စွမ်းအားအဆင့်များ မြင့်တက်လာခြင်း၊ စိတ်နေ စိတ်ထားကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေပြီး စိတ်ဖိစီးမှုနှင့်စိုးရိမ်ကြောင့်ကြမှုအဆင့်များအား သိသာစွာ လျော့ကျ ခြင်းတို့ကို အထောက်အကူပြုသည်။
အရေအတွက် - Oramin-G Soft Cap ဆေးတောင့် ၃၀ ပါသော ဘူး ၁ ဘူး
Oramin-G containsaunique combination of essential vitamins & minerals, Korean Ginseng, and Aloe Vera that work together to promoteahealthy immune system and support overall vitality.
Pacific Nature’s® Oramin-G, isamultivitamin and mineral supplement which supports overall well-being by assisting the functions of various systems in the body. It consists ofasuperior vitamin and mineral core along with Panax Ginseng and Aloe Vera extracts.
Multivitamin isacombination of different vitamins commonly found in food sources. They help bridge nutrient gaps to meet the recommended daily intake which cannot be met with diet alone.
A daily dose of multivitamin helps increase energy levels, improved mood, significantly reduce levels of stress and anxiety.
Includes: 1 box of 30 Oramin-G Soft Cap tablets